शीर्षकमा बाइबल पदहरू: डर -> खराब चरित्र
खराब चरित्र: [डर]
हतास भएकाहरूलाई यसो भन, “बलियो होओ र नडराओ! परमेश्‍वर तिम्रो उद्धार गर्न आउँदै हुनुहुन्‍छ, तिम्रा शत्रुहरूलाई दण्‍ड दिन आउँदै हुनुहुन्‍छ।”
“म तिमीहरूलाई शान्‍ति दिएर जान्‍छु। मेरो आफ्‍नै शान्‍ति म तिमीहरूलाई दिन्‍छु र यो संसारले दिनेजस्‍तो शान्‍ति होइन। आफ्‍नो मनलाई विचलित हुन नदेओ र नडराओ।
भोलिको चिन्‍ता नगर। भोलिको समस्‍या भोलि नै सुल्‍झिन्‍छ। आजलाई आजकै दु:ख पुग्‍दो छ।”
हे इस्राएल, तेरो सृजना गर्ने परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “नडरा, मैले तँलाई उद्धार गरेको छु। मैले तँलाई नाम लिएर बोलाएको छु, तँ मेरो होस्।
घोर अन्‍धकारका बीचबाट भएर जानुपरे पनि हे परमप्रभु! म डराउनेछैनँ किनभने तपाईं मेरो साथ हुनुहुन्‍छ, तपाईंको गोठालाका छडी र लाठोले मेरो रक्षा गर्छन्।
मैले परमप्रभुसँग प्रार्थना गरें, उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो, उहाँले मलाई सारा डरदेखि छुटकारा दिनुभयो।
जहिले-जहिले चिन्‍ता-फिक्री मलाई आइपर्दछ, तपाईंले मलाई सान्‍त्‍वना दिनुहुन्‍छ र खुसी बनाउनुहुन्‍छ।
परमप्रभु मेरो ज्‍योति र मुक्ति हुनुहुन्‍छ, मलाई कसैको डर छैन। परमप्रभुले सबै खतरादेखि मेरो रक्षा गर्नुहुन्‍छ, म कहिल्‍यै डराउनेछैनँ।
परमप्रभु मसँग हुनुहुन्‍छ, म डर मान्‍दिनँ, कसले मलाई के गर्न सक्‍छ र?
उहाँलाई पुज्‍नेहरू सबै परमप्रभुमा भरोसा राख, उहाँले तिमीहरूलाई सहायता र रक्षा गर्नुहुन्‍छ।
[17-18] तर परमप्रभुलाई आदर गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँको प्रेम सदाकालको निम्‍ति रहनेछ। उहाँको करार साँचो प्रकारले मान्‍नेहरूमाथि र उहाँका आज्ञा विश्‍वासयोग्‍यसाथ पालन गर्नेहरूमाथि तिनीहरूका पुस्‍ता-पुस्‍तासम्‍म उहाँको भलाइ रहिरहनेछ।
परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आदर दिने र उहाँको आज्ञा मान्‍न आनन्‍द मनाउने मानिस साँच्‍चै खुसी हो।
 नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु। “तँसित रिसाउनेहरू हार खाएर लज्‍जित हुनेछन्। तिमीहरूका विरुद्धमा लड्‍नेहरू मारिनेछन्। तँसँग लड्‍नेहरूलाई तैँले खोज्‍नेछस् तर भेट्टाउनेछैनस्। तँसँग लडाइँ गर्नेहरू व्‍यर्थका हुनेछन् र पृथ्‍वीबाट लोप हुनेछन्। म परमप्रभु, तेरा परमेश्‍वर हुँ, म तेरो दाहिने हात समातेर भन्‍दछु, ‘नडरा, म तँलाई मद्दत दिनेछु’।”
नडरा, फेरि तेरो अपमान हुनेछैन, तँ होचो पारिनेछैनस्। तेरो जवानीपनको लाज भुल्‍नेछस्, विधवा भएपछिको घोर एक्‍लोपना बिर्सनेछस्।
 धन-सम्‍पत्तिको माया-मोहमा नफस। आफूसँग जे छ, त्‍यसैमा सन्‍तोष गर्ने गर किनभने परमेश्‍वरले नै भन्‍नुभएको छ, ‘म तिमीलाई कहिल्‍यै छोड्‍नेछैनँ, म तिमीलाई कहिल्‍यै त्‍याग्‍नेछैनँ’।” यसकारण हामी ठूलो साहससँग भन्‍न सक्‍छौं, “प्रभुले नै मलाई सहायता गर्नुहुन्‍छ। म कहिल्‍यै डराउनेछैनँ। मानिसले मलाई के गर्न सक्‍छन्?”
१ पत्रुस ३:१३-१४
 तिमीहरू राम्रो काम गर्न इच्‍छुक भयौ भने तिमीहरूलाई कसले हानि गर्छ? राम्रो काम गर्दा पनि दु:ख भोग्‍नुपर्‍यो भने तिमीहरू कति धन्‍यका हौ। कसैसँग नडराओ र चिन्‍ता नगर।